Sidee loo Diiwaan YouTube on Mac
> Resource > Beddelaan > Sidee loo Diiwaan YouTube on Mac
Markii uu daawanayay videos on YouTube.com, ma jirtaa wax fursad ah in aad rabto in aad u badbaadin si aad u computer Mac ama qalabka la qaadi karo? Sidaas, waxaad daawan kartaa offline videos ah waqti kasta iyo meel kasta. Laakiin marka aad bilowdo raadinaya hab wanaagsan oo lagu sameeyo, waxaad ka heli kartaa niyad. Waxaad ka heli kartaa wax badan macluumaad waxtar lahayn oo uu yahay oo kaliya waqti lumis iyo tamarta. Hadda, fadlan eegi jirin dheeraad ah tan iyo markii aad halkan ku sugan yihiin halka aad ka heli kartaa, hab laysku halayn karo oo wanaagsan si ay uga caawiyaan record YouTube u Mac- Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ). Tani taariikhqorihii YouTube u Mac waa u fududahay in ay ku shaqeeyaan oo degdeg ah si ay u qoraan. Waxa kale oo ay kaa caawin karaan badalo ku videos duubay.
Fadlan kala soo bixi barnaamijkii ugu horreeyay oo aad u hesho waxa ay ku rakiban yihiin. Fur barnaamijka dib markii la rakibey. Waxaad ka heli doontaa barnaamijka waxaa si fudud loogu talagalay oo aad ka heli karto waa inay ka shaqeeyaan daqiiqo ah. Tutorial faahfaahsan hoos lagu muujiyey.
1 Tag YouTube.com oo heli videos aad rabto
Burcad siiyaa biraawsarkaaga (Safari, Firefox ama Chrome) oo taga si YouTube.com. Raadi video aad rabto iyo waxa ay furo u ciyaaro.
2 Record YouTube videos
Marka video bilaabi loading, aad ka maqnaan karaa button Download dhinaca midigta sare ee shaashadda video ah. Waxaa Riix dooro xalka aad rabto haddii ay doorashooyin kala duwan. Markaas barnaamijka bilowdo diiwaan video YouTube ah.
Fiiro gaar ah: Haddii video iska leh playlist YouTube ah, waxaad sidoo kale ka arki kartaa doorasho playlist marka aad riix badhanka Download ku. Sidaas, waxaad kala soo bixi kartaa playlist oo dhan in click ah.
Waxa kale oo aad nuqul ka kartaa url video oo taga si barnaamijka si paste button URL guji. Waa maxay dheeraad ah si toos ah waa in jiidi url iyo hoos u barnaamijka.
Fiiro gaar ah: Haddii video aad ka soo bixi iska leh playlist ama channel ah, waxa aad furan kartaa playlist oo dhan ama marin si aad u hesho Download a All badhanka ugu sareysa ee liiska video ah. Click Download badhanka oo dhan, iyo barnaamijka ku bilaaban doono si ay u qoraan farabadan oo dhan videos isla markiiba.
3 Beddelaan YouTube lagu duubay (optional)
Taariikhqorihii YouTube ee Mac sidoo kale aad u saamaxaaya in ay badalo videos ay u dhow oo dhan qaabab caadi ah. Just riix badhanka badalo bidixdiisa video maktabadda soo bixi iyo doortaan qaab saarka doorbidayso aad ka menu hoos-hoos u dooro "fur buuga ka dib markii habka la soo gabagabeeyo" ama "dhoofinta files diinta Lugood haddii ay suuragal tahay" si aad faylka la gediyay ka heli kartaa si deg deg ah oo lagu wareejiyo qalabka la qaadi karo aad.
Waxaad sidoo kale ka ciyaari kartaa videos diiwaan ciyaaryahanka hidi iyo sidoo kale maareeyo files video on your computer oo ay iyaga soo degida barnaamijka. In eray, waa kaliya xirmo dhan in rajada kaa caawinaya in aad u qoraan YouTube, loogu badalo in ay ku dhow oo dhan oo ah qaabab kale ee caadiga ah iyo maarayn your computer video files.
Video Grabber u Mac: Download Online Streaming Video Si fudud (Mavericks dar)
Sida loo Download Videos ka YouTube iyo Shabakadaha More for Mavericks
Sida loo Play iyo Beddelaan Sony AVCHD Files
YouTube downloader for Windows 8: Download YouTube Video in Windows 8
Sida loo Beddelaan wmv in MPEG (MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-3 / MPEG-4) ee Mac / Windows
Sida loo bedelaan MKV in AVI ee Mac / Windows